Nampahafantarina tamin’ny alalan’ny fanambarana fa afaka mitondra entana hatramin’ny 5,5 taonina io fiaramanidina io ary sady haingana no manaraka tsara ny fenitra misy. Na izany aza dia manaja ny fepetra rehetra mahakasika ny ara-pahasalamana ireo ekipa miasa ao amin’ I Tsaradia ary hanaraka tsara ny filan’ny mpanjifa araka ny fanambarana hatrany. Hisy araka izany ny sidina ana habakabaka hitaterana ny entana avy any amin’ny faritra mankaty Antananarivo na mifanohitra amin’izay. Ny alahady 24 mey ho avy izao aloha dia hisidina ny kaompania nasionaly Tsaradia hanao ny Antananarivo-Sambava-Antananarivo. Hiainga amin’ny 9 ora eto an-drenivohitra izany ary hiala indray any Sambava amin’ny 12 ora sy fahefany. Tsiahivina fa nandritra ny volana Martsa sy Aprily dia nisy ihany ny sidina manokana saingy nitaterana ireo fanafody sy fitaovana ary ireo mpiasan’ny fahasalamana ihany izany. Teo ihany koa ny nitaterana ireo teratany eoropeana niisa 88 ary nitondrana ireo Malagasy taraiky hiazo ny fonenany.